Miyaad Qab Weyn Tahay Mise Waad Hanweyn Tahay Qalinkii: Eng Yahye Awil
Thursday January 11, 2018 - 00:46:13 in Maqaallo by Wariye Mohamed BK
Miyaad Qab Weyn Tahay Mise Waad Hanweyn Tahay Qalinkii: Eng Yahye Awil Miyaad qabweyn tahay mise waad hanweyn tahay Hanka – waxa qofku rumaysan yahay inuu yahay ama uu qaban karo, ayaa saameeya fal kasta oo uu ku kacayo iyo sida uu uga midho dhalinayo yoolka uu hiigsanayo. Qofka hankiisu sarreeyaa wuxu tamadiyaa naftiisa kamana gabbado tixgelinta uu mudan yahay inuu helo. Marka uu guul darro la kulmo ma liido naftiisa iskumana dulleeyo hawshaa ragaaday, balse wuxu dib u saxaa qaladkii guul darrada dhaliyay waxaanu u hawl galaa siduu mar labaad u hanan lahaa hadafkii dhicisoobay. Haddii la isku dayo in lagu qalqaaliyo samaynta wax aanu rabin, qofka hankiisu sarreeyaa waxa uu muujiyaa keeno diidnimo sal adag. Wuxu ku kalsoon yahay shakhsiyaddiisa mana qawado waxa uu yahay ama uu haysto. Duruufuhu ma doorshaan qiyamkiisa, kamana duwaan tubta uu samaha bidayo. Hanka sarreeyaa lama mid maaha qab weynida iyo isku khushuucidda. Qofka hankiisu sarreeyaa iskuma qabo inuu dadka ka sarreeyo mana yaso dhiggii, balse wuxu aaminsan yahay inuu ka duwan yahay oo uu yahay qof gaar ah kaasoo fikirkiisa u xor ah. Waxa keliya ee hanka lagu hor mariyaa wa in qalbigaagu quutaa xaqiiqda iyo waayaha dhabta ah ee ku gedaaman noloshaada iyo deegaanka aad ku noshahay. Isku day oo naftaada u laqin inaadan iska indho saabin libinta iyo guusha naftaadu asiibtay iyo ta bulshada kale. Isku day inaad u hambalyayso guulaha uu gaadhay qof dhigaa ah. Ha ka xumaan oo ha xasaradayn himilada iyo higsiyada u hir galay shakhsi kale. Hanweynidu waxay deris la tahay hayaanka toosan iyo higsiga noloshaada oo aad ku hubayso hilaadin iyo hogo tusaalayn la hubo. Hanweynidu ma aha wax lagu dhasho ee waa dabci la hanan karo haddii nafta lagu laylyo. Qore: Eng Yahye awil mohamoud E-mail Yahye. Awil27@gmail.com